तालिम लिएका शिक्षकहरुले वडामा काम गर्नुपर्ने — संयोजक, सामजिक विकास समिति पालुङ्टार – गोर्खा संसार
तालिम लिएका शिक्षकहरुले वडामा काम गर्नुपर्ने — संयोजक, सामजिक विकास समिति पालुङ्टार
गोर्खा संसार २०७६, ७ असार शनिबार १५:५३
पालुङ्टार नगरपालिकामा मा नेपाल शिक्षक महासंघ नगर समितिले आधारभूत तहका शिक्षकहरुका लागी ७ दिने आधारभूत आइ सि.टी. तालिम सम्पन्न गरेको छ ।
नगरपालिकाको सहयोग र शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा पालुङटार को समन्वयमा नगरपालिका भरिका आधारभूत तहका शिक्षकहरुका लागी तालिम प्रदान गरेको हो । आधारभूत तहका शिक्षकहरुका लागी आइ सि टि मार्फत शिक्षण गर्न सक्ने बनाउनको लागी पहलस्वरुप तालिमको आयोजना गरेको महासंघ पालुङटारका अध्यक्ष एवं त्रिवेणी मा.वि. क्लष्टरको तालिम समापन समारोहका सभापति चेतनाथ पन्तले बताउनुभयो ।
समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै पालुङटार नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवं वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष भेजराज पाण्डेले तालिममा सिकेका कुराहरुलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र तालिमको लक्ष्य पुरा हुने बताउनुभयो । सोही क्रममा उहाँले तालिममा सहभागी शिक्षकहरुले कम्तीमा २ वा ३ दिन वडा कार्यालयमा गएर काम गरेर देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । शैक्षिक गुणस्तरमा कमी आउन नदिन आफूहरु हरतरहले लागीपर्ने र त्यसको लागी शिक्षकहरुले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समापन कार्यक्रमका सभापति पन्तले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा सहयोग गर्ने सवै पक्षहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै हरेक शिक्षकहरुले एउटा ल्यापटप लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सहभागी शिक्षिका सरिता न्यौपानेले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको समापन कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीको तर्फबाट बोल्दै शिक्षक काजीबाबु खनालले आइ.सि.टि. तालिम अत्यन्त उपयोगी भएको बताउनुभयो ।
शिक्षक महासंघ पालुङटारका सहसचिव प्रेम कोइरालाले तालिममा सहभागी शिक्षकहरुले विद्यालयमा गएर अन्य शिक्षकहरुका लागी सहजकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै सोही क्रममा उहाँले शिक्षणमा अधिकतम रुपमा आइ.सि.टि.को प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
प्रशिक्षक भुवन अधिकारीले मन्तव्य राख्ने क्रममा शिक्षा शाखासंग राम्रोसंग समन्वय गर्नुपर्ने र यस तालिमको आधारमा सेवामा रहेका शिक्षकहरुका लागी अंक व्यवस्थापन गरी बढुवामा सहयोग पुग्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
तालिममा आधारभूत तहका शिक्षकहरुका लागी वर्ड, एक्सेल, पावरप्वाइन्ट, कक्षा शिक्षणमा क्ष्ऋत् को प्रयोग तथा इमेल इन्टरनेट र प्रभावकारी प्रयोग तथा उपलब्धी मुलक शिक्षण क्रियाकलपको बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
४० जना शिक्षकहरुका लागी २ स्थानमा तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । जसमध्ये भवानी मा.वि.मा २२ जना र त्रिवेणी मा.वि.मा १८ जना गरी ४० जना शिक्षकहरु सहभागी रहेका थिए । जसमध्ये भवानी मा.वि.मा सुरेन्द्र देवकोटा, प्रकाश पोखरेल, विष्णु गिरि, वि.नि. माधव पोखरेल, अशोक श्रेष्ठ लगायतका प्रशिक्षकहरुले प्रशिक्षण प्रदान गरिरहेका छन । त्यस्तै गरी त्रिवेणी मा.वि.मा सञ्चालित तालिममा भुवन अधिकारी, मिलन राना, समीर अधिकारी, रविन्द्र कंडेल, नविन पन्त लगायतकाले प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै गरी आगामी असार ८,९ र १० गते शिक्षक महासँघले नि.मा.वि. तहका बिज्ञान शिक्षकहरुका लागी ३ दिने कार्यशाला गोष्टीको आयोजना गरेको महासंघका अध्यक्ष पन्तले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ११,१२ र १३ गते माध्यमिक तहका बिज्ञान शिक्षकहरुका लागी पनि कार्यशाला सञ्चालन गरिने समेत बताइएको छ । कार्यशाला दुवै तहका विज्ञान शिक्षकहरुका लागी सञ्चालन हुने सो कार्यशाला भवान बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।
बिशाक्त रक्सी पिएका कारण १० जनाको ज्यान गयाे
२०७७, २२ बैशाख सोमबार २०:३३
२०७७, १९ जेष्ठ सोमबार ११:४३
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना तुरुन्त संशोधन गर्न सुझाब
२०७८, २१ जेष्ठ शुक्रबार १७:३०
२०७६, ९ जेष्ठ बिहीबार ००:४३